ပင်လယ်ကမ်းခြေ၊ ကျွန်းဆွယ်၊ အငူများ | JAPAN DISCOVERY
မူလနရော » ပင်လယ်ကမ်းခြေ၊ ကျွန်းဆွယ်၊ အငူများ
Updated: 2016-09-26 16:52
ရာဘာခဲ ဆည် ရေကန်ကြီး
နာကစွတ် မြို့ ရာဘာစဲ ဒေသမှာ ရှိတဲ့ ဆည်ကြီး ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဆည် ကိုဒေသခံ တို့ က ရေကန် ကြီး လို့ ခေါ် ဆို ပြီး တော့ ထို ဆည်တွင် ရေပန်း ကြီး လည်း ရှိပါတယ်။ရေပန်း ကြီး ကို ကြည့် လို့ ရတဲ့ စင်တစ်ခု လဲရှိပါတယ်။...
Updated: 2016-09-26 14:54
ရာနဂ၀ အပျော်စီး လှေကလေး
ရဲတိုက် ရဲ့ အောက် ခြေ မြို့လေး ၊ နိုင်ငံကျော် ကဗျာဆရာ တို့ ရဲ့ မွေးရပ်မြေလေး ရာနဂါဝ ။ မြို့ လေး ထဲ ကို အလည် အပတ် သွား ရန် ကတော့ အပျော် စီး လှေကလေး တွေ ( ခါဝခုဒရိ) ပဲဖြစ်ပါတယ်။ နွေဦး ၊နွေ၊ေ...
Updated: 2016-09-08 14:17
ဟာ့ခုစူအိ ဆည် ( ရေဖြူ တမံ )
နာမည်အပြည့်အစုံကတော့ နဲနဲ ရှည်ပါတယ်။ ( ဟာ့ခုစူအိတာမဲအိခဲအဲန်းတဲအိ) လို့ခေါ်ပါတယ် ။ အာစိုးဒေသ က ဂိုင်းလင်းတောင်ပေါ်က စီးဆင်း ကာ အိုးအိတခရိုင် ကို အရှေ့မှအနောက် သို့ စီးဆင်းနေသော အိုးနော့ မြစ် မှာ တည်ထား...
Updated: 2016-07-12 13:35
အာခိရောရှိ တောင် ကုန်း ရဲ့ မြေအောက် ၁၀၀ မီတာလောက် ကျယ်ဝန်းပြီး ၊လက်ချိုးရေလို့ အောင် ရှားပါးတဲ့ သဘာဝ ဥမင်လှိုဏ်ခေါင်း ကြီး တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။လွန် ခဲ့ တဲ့ နှစ်ပေါင်း သိန်း ချီလောက် က တောင် ကုန...
Updated: 2016-07-11 13:42
ဟကိုးနဲ Hakone (ခါနဂ၀ ခရိုင် ၊ ဂျပန်နိုင်ငံ)
( ဟကိုးနဲ တောင်တန်း ဟာ ဧကရာဇ် ရဲ့ ဓါးလက်နက် ) ဆို ပြီး တော့ သီချင်းဆိုရလောက်အောင် ရှေးရှေး တုန်းကထဲ က ဂျပန် နိုင်ငံ ရဲ့ ဆက်သွယ်ရေး ၊ ကူးသန်းသွားလာရေး တို့ အတွက် အင်မတန် အရေးပါ အရာရောက်ခဲ့တဲ့ နေရာတစ်ခု...
Updated: 2016-06-16 16:42
ရှိရခါဝ မြစ်ဖျား ဟာ၊ သဘာဝ ပတ် ၀န်းကျင်ထိန်းသိမ်း ရေး အဖွဲ့ ရဲ့ အသိအမှတ် ပြု ခြင်း ခံ ခဲ့ ရတဲ့ နေရာ တစ် ခု ဖြစ်ပါတယ်။ ထို မြစ် ဖျား ရေ အပူ ချိန် ဟာ ၁၄ ဒီဂရီစင်တီ ရှိပြီး အတွင်း က နေ ရေ က ၆၀...
Updated: 2016-06-06 14:28
အိခဲဒ ကန်တော် ကြီး
အိခဲဒ ရေ ကန် ကြီး ဟာ အကယ် ၁၅ ကီလိုမီတာ ၊ ရေအနက် ၂၃၃ မီတာ ရှိ တဲ့ ခရူး ရှူး ရဲ့ နာမည် ကြီး ကာရုဒေလာ ( နက် ရှိုင်းသောရေကန် ) ဖြစ် ပါ တယ်။ ရေကန် ရေရောင် ကတော့ နက် ပြာရောင် တောက် ပ နေပြီး ၊ စစွတ်မဖူ...
Updated: 2016-05-24 13:52
ခုမဂ၀ ခုဒရိ ( လှေစီး ခရီး )
ခုမ မြစ် ဟာ ခုမမိုတို တောင်ပိုင်း ခရိုင် မှာ ရှိတဲ့ ဟိတိုရောရှိ ဒေသ ကို စီးဆင်းနေပြီး ရာစုရှိရောဟဲရ ဒေသကို ဦး တည် ပြီး ရာစုရှိရော ပင်လယ် တွင်း ကို စီး ဆင်း နေတဲ့ ခုမမိုတို ခရိုင...